Xeer ilaaliyaha Somaliland oo soo bandhigay dambiyada loo haysto wariye Coldoon (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Xeer ilaaliyaha Somaliland oo soo bandhigay dambiyada loo haysto wariye Coldoon (AKHRISO)
Wariye C/maalik Muuse Coldoon oo ka mid ah wariyaasha Soomaaliyeed islamarkaana muddo bil ah ku xiran xabsi ku yaalla magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland, ayaa weli aan lasoo taagin maxkamad xukunta dambigiisa.
Warqad kasoo baxday xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee maamulka Somaliland ayaa lagu xusay in wariye C/maalik Muuse Coldoon loo haysto dambiyo kala duwan oo ay ka mid tahay inuu khalad weyn ka galay qarannimada iyo jiritaanka Somaliland iyo aflagaado uu u geystay madaxda maamulkaas.
Sidoo kale, warqadaasi ayaa ku xusan in C/maalik Muuse Coldoon uu taageeray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo islamarkaana baraha bulshada ay ku xiriirto soo dhigay ereyo ay ka mid yihiin inay Soomaaliya mid tahay, taas oo ay ku tilmaameen inay tahay mid dhaawaceysa jiritaanka qarannimada Somaliland.
Wariye C/maalik Muuse Coldoon ayaa sidoo kale lagu eedeeyay inuu aflagaado u geystay mas’uuliyiiin uu ka mid yahay afhayeenka madaxtooyadda Somaliland Xuseen Aadan Cige (Dayr).
Si kastaba ha ahaatee, warqadaan kasoo baxday xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee maamulka Somaliland ayaa kusoo beegantay xilli maalintii shalay lagu ballansanaa in wariye C/maalik Muuse Coldoon lagu sii daayo qaab damaanad ah.
Hoos ka aqriso warqada xeer ilaaliyaha guud ee Somaliland